Naya Bikalpa | » लाभका लागि गुट बदल्दै हिँड्ने केन्द्रीय नेताहरु लाभका लागि गुट बदल्दै हिँड्ने केन्द्रीय नेताहरु – Naya Bikalpa
लाभका लागि गुट बदल्दै हिँड्ने केन्द्रीय नेताहरु
प्रकाशित मिती: २०७६ पुष २१, ०७: ४७: २५
काँग्रेसका नेताहरुमा आफूलाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गर्ने र सिंगो काँग्रेसको भन्दा आफ्नो फाइदाका लागि जुनसुकै बेला गुट–उपगुटमा समावेश हुने परिपार्टीले काँग्रेसलाईनै दिशाहिनतर्फ डो¥याएको नेपाली बौद्धिक समाजले त्यति मन पराइरहेको छैन ।
यी अवसरवादी नेताहरुका कारण सिंगो काँग्रेसनै अलमलिएको भन्दै देशव्यापी रुपमा कार्यकर्ताबीच आक्रोश बढ्न थालेको छ । यस्तै घटना कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुस १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केही असन्तुष्ट पक्षकै केन्द्रीय सदस्यहरु देखा परेपछि अहिले काँग्रेसभित्र निकै हल्लीखल्ली सुरु भएको छ ।
यसरी गुट बदल्ने ति नेतालाई सभापति देउवाले निकै सुवर्ण अवसर दिने बताइएको छ । केही नेताले त नगद बुझेको सम्म आरोप लगाउन थालिएको छ । पौडेल गुटका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का, चीनकाजी श्रेष्ठ र गोविन्द भट्टराई सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
सिटौला गुटका भएपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी र शिवप्रसाद हुमागाईं पनि विहीबारको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । उमाकान्त चौधरी नेविसंघबाट राजनीति शुरु गर्दै नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०५६ सालमै सांसद हुने कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।
२०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट देउवा अलग हुँदा उनी त्यतै लागेका थिए । पछि देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा विजयकुमार गच्छदारले गुट खडा गर्दा उनी उतै लागे तर गच्छदारले कांग्रेस छाडेपछि भने देउवासँगै नेपाली कांग्रेसमा आए ।
२०७२ सालको कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा सिटौला नेतृत्वको तेश्रो समूहमा उनी कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार लडेका थिए । पदाधिकारीमा पराजित भएकालाई देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्दा चौधरी पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् ।
पौडेल समूहप्रति त्यति लगाव वा झुकाव नराख्ने चौधरी सिटौला समूहमा बसेर देउवालाई चिढ्याउन नहुने पक्षमा लविङ गर्ने नेता हुन् । संसदीय निर्वाचनमा देउवाले चौधरीलाई आर्थिक सहयोग यथेष्ठ गरेका कारण चौधरी देउवाबिरुद्ध लाग्न नसकेको काँग्रेसभित्रकै नेताहरुको बुझाई छ ।
अर्का हुमागाईं पनि १३औं महाधिवेशनमा सिटौला समूहबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार भएर पराजित भएका थिए । उनलाई सिटौलाकै सिफारिसमा सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका हुन् । गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको निधनपछि उनी पौडेलसमूहप्रति निकै अनुदार हुँदै आएका थिए ।
त्यसैले उनी सिटौला समूह नछाडे पनि देउवाले बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमित उपस्थित भइरहेका छन् । सिटौला पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु गगन थापा र प्रदीप पौडेलले संस्थापन पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिस्कार गर्दै आइरहेका छन् । पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा नेता पौडेल पक्षधरबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित आनन्दप्रसाद ढुंगाना गुट परिवर्तन गरी देउवा समूहमा गएका हुन् ।
उनी २०७१ साल असोजमा संचार मन्त्री हुन् भनेर तत्कालिन सुशील कोइरालाको विश्वासमा दौरा सुरुवाल सिलाएर रसभरी बाँडेका नेताका रुपमा चिनिन्छन् । तर, आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै तत्कालिन संस्थापन पक्षसँग गुनासो गरिरहेका ढुंगाना १३औं महाधिवेशन सकिएदेखि नै सभापति देउवाका विश्वास पात्र विमलेन्द्र निधिकै सल्लाहमा देउवा गुटमा छिरेका हुन् ।
बाहिर आफूले गुट परिवर्तन गरेको भनेर औपचारिक रुपमा नभनेका ढुंगाना हालैको बैठकमा कोइराला परिवारका सदस्यबाट टाढा भएपछि संस्थापन पक्षमै गएको आशंका गरिएको छ । सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदा संगठन विभाग प्रमुख भएका ढुंगाना देउवा सभापति हुँदा समेत संगठन विभाग पाउने आशामा संस्थापन पक्षमा लागेको धेरैले अनुमान गरेका छन् ।
पौडेल पक्षधरबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित कुलबहादुर गुरुङ भने संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्ष कुनै गुटमा पनि सहभागी छैनन् । कांग्रेसका सबै भन्दा जेष्ठ केन्द्रीय सदस्य गुरुङ स्वास्थ्यका कारण पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका सबैजसो बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् । शारीरिक रुपमा असक्त भएका केन्द्रीय सदस्य नरहरी आचार्य सभापति देउवाबाट मनोनित केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
उनी पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । आचार्य यतिबेलासम्म देउवा र पौडेल पक्ष कतैपनि खुलेका छैनन् । मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सानेपा गएर आफ्नो भनाई राखेका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य पुस १७ मा बोलाइएको बैठकमा समेत उपस्थित नभइ बैठक शुरु भएपछि वाहिरिएका थिए ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्कालाई विदेश विभाग प्रमुख बनाउने आश्वासन आएपछि उनी पनि कोइराला गुट छोडेर देउवाका पछि लागेका हुन् । देउवाले नेपाली कांग्रेस छाडेर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाउँदै देउवाकै सारथी भएका खड्का तत्कालिन केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतसँग टसल गरेपछि तठस्थ हुँदै पार्टी एकीकरणपछि शुशील कोइरालाको निकट भएर पार्टीमा क्रियाशिल भएका थिए ।
१३औं महधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निकट भएका खड्का अहिले देउवाको पोल्टामा पुगेका हुन् । कृष्णप्रसाद भट्टराइको सहयोग, सहायता र सदासयताले क्यानाडा छोडेर नेपाल आएका डा. खड्कालाई कृष्णप्रसादले नै नेपालको राजनीतिमा स्थापित गराएका थिए ।
उता नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवशेन बिराटनगरमा हुँदा तत्कालिन गृह मन्त्री खुमबहादुर खड्काको समर्थन, सहयोग र दबाबमा साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरी अध्यक्ष बन्न सफल गोविन्द भट्टराई यतिबेला देउवाको पोल्टामा पुगेका छन् । उनलाई पार्टीको विद्यार्थी विभाग दिने आश्वासनका साथै यसै वर्ष आमाको दुःख बोक्दा देउवा पक्षका कुनै व्यक्तिले राम्रै सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएर पनि मैले केही पाइन, आर्थिक अवस्था कमजोर भयो भन्दै रोइलो गर्ने गोविन्दको दुःखहरण गर्ने योगदान देउवाले दिएको गाईंगुर्इं बुढानिलकण्ठमा सुन्न थालिएको छ । नेता सिटौला भने मंसिर २९ गते भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हुनुअघि सानेपामा पुगेर बैठक स्थगित गर्न लगाएका थिए ।
देउवाको कट्टर बिरोधीका रुपमा चिनिएका नेता डा. शेखर कोइराला र तेश्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका सिटौला भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र पौडेल समूहको बैठक, भेला र पत्रकार सम्मेलनमा समेत उपस्थित हुने गरेका छैनन् ।
देउवाले बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिस्कार गर्दै आएका नेता सिटौला र डा. शेखर कोइराला पार्टीको कार्यक्रम लिएर प्राय झापा र मोरङका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । आज सोमबार दुवै नेता जीपी प्रतिष्ठानले धनकुटाको मौनाबुदुकमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने बताएका छन् ।
२०७६ पुष २१, ०७: ४७: २५